Blog-Tipping: Catalyze, Shabakad Bulsho oo loogu talagalay Horumarinta Barnaamijka iyo Khubarada Isticmaalka | Martech Zone
Blog-Tipping: Catalyze, Shabakad Bulsho oo loogu talagalay Horumarinta Barnaamijka iyo Khubarada Isticmaalka
Axad, Oktoobar 21, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Muddo ayaa laga joogaa aniga tusay baloog waxaana isoo xasuusiyay taas dhowr todobaad ka hor Tom Humbarger ee Qabsashada. Isbadal shaqo iyo heshiis kooxeed ayaa si weyn u soo gaabiyey waqtiga aan ku qaadan karo goobtayda maalin kasta. Nasiib wanaag, taasi waxay bilaabaysaa inay hadda soo jeesato.
Marka hore, Jawaabcelin kooban oo ku saabsan Qoraal-Bixin Hore oo Blog ah
Waxaan war ka helay André oo jooga Lendo.org taas oo ah isbedelada aan kula taliyay degelkiisa waxay keeneen xoogaa kordhin aan caadi aheyn oo soo booqdayaasha iyo aragtida bogga André wuxuu lahaa qiyaastii 290 booqdayaal qaas ah maalintii iyo qiyaastii 700 bog oo bog ah kahor isbadalada. Hadda, Lendo.org leeyahay 1200 soo booqdayaal u gaar ah maalintii, iyo qiyaastii 3000 oo faallooyin ah!!!
Maanta, waxaan soo gudbinayaa Catalyze - Beel loogu talagalay Falanqeeyayaasha Ganacsiga iyo Xirfadlayaasha UX - Dadka Hal-abuurka ah ee Naqshadaynaya Software aan caadi ahayn. Catalyze waxay sifiican uga gudubtaa baloog, runti waa shabakad bulsheed markaa tani waxay noqon doontaa caqabad adag! Tom wuu i faqay isbuucyo ka hor si dulqaad ahna wuu ii sugayay!
Waad ku qosli kartaa tan, laakiin waxaan si daacadnimo ah u lahaa inaan hareeraha ka qodo si aan u ogaado macnaha "UX"! Ma aanan ogeyn inay ahayd soo gaabinta Khibradda Isticmaalaha. Ma hubo in dadku raadinayaan "UX" may waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ku qorto "Khibrad Isticmaalaha" cinwaanada bogga, iwm. UX si ay matoorrada raadintu u gurguurtaan ereyga iyo soo gaabinta labadaba.
Waxay noqon doontaa caqabad, laakiin runtii waxaan kugu dhiirigelin lahaa inaad ku siiso xiriiriyeyaal quudin boggaaga guriga ah. Haddii aad horumarin laheyd quudin dhameystiran oo ku saabsan qoraalladii ugu dambeeyay, doodaha ugu dambeeyay ee madasha, iyo laga yaabee dhacdooyinkii ugu dambeeyay - taasi waxay runti siin doontaa qiimo badan akhristayaasha.
Isla qoraalkaas, waxaan ogaaday inaan si dhab ah uga heli karo RSS quudinta bartaada dhexdeeda laakiin kuma xirna cinwaankaaga cinwaanka lajirka bog furayaasha. Dhammaan biraawsarayaasha ugu dambeeyay waxay ka raadin doonaan astaamaha xiriirinta RSS ee cinwaanka cinwaanka bogaggaaga waxayna si otomaatig ah u soo bandhigayaan badhanka rukunka RSS ee Cinwaanka Bar. Waa tan waxa koodhku u eg yahay:
Waa tan sida ay umuuqato markaad aadeyso boggeyga Firefox:
Waa kuwan sida boggaagu u eg yahay:
Hadaad ufududeeysid inay dadku iskaqortaan bartaada, waxaad kasban doontaa macaamiil badan. Hubso inaad isticmaasho qalab sida FeedPress si aad ula socoto inta macaamiil ee aad haysato.
Haddii aan ahay Google Bot oo xoqaya boggaaga, waxaan ku tilmaami lahaa boggaaga "Blog thumbarger"… malaha ereyada muhiimka ah ee aad raadineysay. Haddii aad u beddeli karto cinwaannada boggaaga cinwaanka dhabta ah ee bogga, gudaha kiiskan: Ma waxaad tahay Fikir Naqshadeeye ah? Ka tarjum Xikmadda hadda jirta Tom Humbarger
Mashiinnada raadintu waxay fiiro gaar ah u leeyihiin sida nuxurka loogu dhisay bogaggaaga sidoo kale. Marka la eego qoraaladaada blogga, cinwaanka boostada ayaa si fudud xiriir ula leh fasal = ”siblog_PostTitle”. Taasi uma sheegi doonto Mashiinka Raadinta inay jiraan wax muhiim ah oo ku saabsan Cinwaankaas. Haddii aad awoodo inaad gasho caloosha dalabkaaga, waxaan hubin lahaa inaan haysto calaamado cinwaanno, ama> h1> ama> h2> tags oo ku lifaaqan cinwaanka boostada. Waxaan sidoo kale kugula talin lahaa qorista qoraalada adoo adeegsanaya tags sidoo kale.
Waxaa laga yaabaa in bogga fursadda ugu badani uu yahay boggaaga guriga. Kani waa hal bog oo weyn oo xiriiriyeyaal ah markii uu arko Mashiinka Raadinta. Hadday ahaan lahayd bog lagu qaabeeyey cinwaanno iyo qoraalo si sax ah loo calaamadeeyay, waxaad awoodi kartaa inaad si fiican u muujiso waxyaabahaas.
Adiga kalandarka bogga waxaa ku yaal xiriiriye Subscribe .. laakiin waxba kuma xirna xiriiriyeyaasha si aad ugu rukumato. Waxaan sidoo kale hubin lahaa inaad tilmaamaysid cinwaanada bogga sidaan wax uga qoray cinwaannada baloogyada.
Qoditaanka qaab dhismeedkaaga bogga, waxaan ku arkaa miisas aad u adag oo miisas iyo miisas ah. Ma doonayo inaan tallaabo ku qaado saaxiibaday .NET horumariyayaal, laakiin tan ayaan badanaa arkaa inay xanuunayso. Soosaaraha weyn ee .NET wuxuu ku adkaan doonaa inuu helo cunsur, sidaas darteed wuxuu tuurayaa miis agtiisa ah si ay uga fududaato.
Miisaska waxaa loogu talagalay xogta, jaantusyada iyo qaababka qaab-dhismeedka loogu talagalay waxyaabaha ku jira.
Ka fakar sidan - iska dhig inaad tahay gurguurto mashiinka raadinta oo aad isku dayeyso inaad 'aragto' waxa ku jira bogga faa'iido u leh tilmaamida. Crawlers waxay qaataan qayb hoosaadka bogga… cidina runti ma oga inta boqolkiiba, laakiin ma qaadanayaan bogga oo dhan. Codsigaagu wuxuu leeyahay koodh qaabeed aad u tiro badan oo ay adag tahay in si dhab ah loo helo waxa ku jira! Waqtiga aad qabanaysana, wuxuu kasocdaa bogga. Qaabkani waa mid caan ku ah horumarka .NET. Waxay ka dhigeysaa arjiga mid sahlan in la qoro, laakiin way ku adag tahay guurguurayaasha inay wax akhriyaan. Haddii ay jiraan wax macno ah oo aad adigu ku siin karto jawaab celin nidaamkaaga Maareynta Mawduuca, fadlan iyaga la socodsii.
Runtii waxaan doonayay inaan qaato meesha ugu sarreysa "Powered by iRise" si aan u helo macluumaad dheeri ah laakiin waxay kuxirantahay bog maran.
Waxaad leedahay tags firfircoon Meta ee ereyada muhiimka ah iyo sharaxaada bogga. Arrin la yaab leh, matoorada raadinta badankood wax badan ma fiiriyaan kuwan, laakiin ma dhaawici karaan. Tilmaantaada meta waxay u baahan tahay xoogaa shaqo ah, in kastoo. Haddii aan arko boggaaga kalendaarka oo soo baxay natiijo ahaan, sharraxaadda waxay ku soo baxaysaa "Catalyze | Dhacdooyinka ”. Ma hubo inaad ka heli doontid dad badan oo riixaya taas! Taa baddalkeeda, waxaan ka faa'iideysan lahaa sadarkaaga koowaad, "Kalandarka dhacdooyinka 'Catalyze event' waa ilo dhammaystiran oo laga helayo dhammaan howlaha? ma deegaan mise qaran? taas oo ay xiiseynayaan falanqeeyayaasha ganacsiga iyo khibradaha khibradaha isticmaalaha. ”
Ma jiro faylka robots.txt ee galkaaga xididka. Faylasha 'Robots.txt' ha u oggolaadaan bots Injiinka Raadinta inay ogaadaan sida aad u rabto bartaada loo baaray. Waxaad ka heli kartaa tan macluumaad ah Robots.txt halkan FAQ .
Ma jiro feylasha mareegaha.xml ee ku jira galkaaga xididka iyo ma jiro faylka Robots.txt ee tilmaamaya meesha ay tahay. Fure u ah sameynta mashiinka raadinta barta saaxiibtinimo ayaa sahleysa Mashiinnada Raadinta inay khariidadeeyaan goobtaada oo ay ogaadaan halka ay wax ka jiraan. Khariidadda degelku waa khariidad barnaamij oo loogu talagalay boggaaga. Haddii kale, Mashiinnada Goobiddu waxay kaliya ku baari karaan bogga iyagoo isku xiraya… iyagoo aan garanaynin waxa muhiimka ah iyo sida goobta loo abaabulay. Tani waxay noqon kartaa waxa ugu muhiimsan ee aad u sameyn karto bartaada! Akhriso meesha Khariidadda bogga
Waxaan ku qiyaasayaa kan ugu dambeeya, laakiin marka la eego la'aanta aaladaha dhamaadka-dhamaadka ee lagu kiciyo Catalyze, boggaaga ayaa laga yaabaa inuusan ka daalin Google Blogsearch iyo Mashiinnada Raadinta ugu weyn marka boggaaga wax laga beddelo ama qoraallada blog-ka la sameeyo. Mar labaad, maahan in bartaada la ogaan doonin, laakiin si firfircoon u ogeysiinta adeegyada hareeraha shabakadda waligood waxba ma yeeli doonaan.
Waxaad haysataa hal meel oo ah bog, Tom, laakiin cidina kama warqabto inay jirto sababtoo ah la'aanta wax Naqshad Raadinta Qalabka. U fiirso SEODigger boggaaga oo waxaad kaliya u imaanaysaa "Catalyze". Waxyaabahaas oo dhan waa la khasaaray ilaa aad ka heli karto bogga Raadinta Mashiinka saaxiibtinimo. Haddii aad la yaaban tahay sababta “Catalyze” ay u tahay eraygaaga muhiimka ah, fiiri a raadinta gadaal boggaaga waxaadna arki doontaa sababta.
Nasiib wanaagsan! Ma hubo inaad heysato ilo horumarineed si aad wax uga beddesho ama waa inaad ka shaqeysaa shirkadda sameysay arjiga, laakiin waxaa jira xoogaa shaqo ah oo la qabanayo.
Tags: tilmaamid blogtalooyinka blogbislaado
Live, Jacayl, Qosol
Sidee Amarka Hawlgalku iigu diyaariyey Barnaamij
Oktoobar 23, 2007 at 9:49 AM
Haa! Tilmaamuhu waxay ahaayeen horumar weyn oo ku saabsan balooggeyga. Hadda waxaan shaqeynayaa si aan u gaaro 2000 uniques maalin kasta.
Shaqo wacan Douglas!